समस्या र अल्झनको बर्ष | Epradesh Today
Homeफिचरसमस्या र अल्झनको बर्ष
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एकवर्ष पूरा भइसकेको छ । २०७४ साल असारमा भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सम्हालेको एकवर्ष बितेको छ । २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिबिहीन बनेको स्थानीय सरकार अहिले पूर्णरुपमा क्रियाशील रहेको छ । धेरै अपेक्षा, योजना र आश्वासन बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहरुको एकवर्ष कसरी बितेको छ ? एक वर्षको अवधिमा अपेक्षा अनुसारको स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छ की छैन ? कस्ताखालका समस्या, चुनौती, जटिलता, अवसर भूमिका देखिए ? त्यो विषयमा हामीले जनप्रतिनिधिका एकवर्ष खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । प्रदेश टुडेको साप्ताहिक स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाहसँग एकवर्षको अनुभवका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, कुराकानीमा आधारित अनुभवको सम्पादित अंश ।
वीरेन्द्र कुमार शाह (वडा अध्यक्ष)
वडा नं. ५ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ
निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हालेको एकवर्ष पूरा गरेका छौँ । यो एक वर्ष खासगरी केही मात्र काम र धेरै सिफारिस गर्नमै बितेको ठानेको छु । आफूले व्यक्तिगत रुपमा यो एक वर्षमा कामभन्दा पनि विभिन्न समस्याहरु झेल्न नै बितेको पाएको छु । यो अल्झनको वर्ष पनि हो । यो एक वर्षमा धेरै नयाँ योजना र नयाँ कामको थालनी गरेका छौँ । पहिलो बर्ष जनतासँग साथमै रहेर केही नयाँ कामको सुरुवात र धेरै सिफारिस गर्नमै सकिएको छ । बाँकी कार्यकाल नयाँ र सिर्जनशील काममा लाग्ने छ । हेर्नुुस् जनप्रतिनिधि भएर आएपछि काम गर्नुपर्छ भनेरै आएको हो, त्यसकारण पनि पहिलो बर्षमा बजार व्यवस्थापनको लागि केही नमुना काम गर्नतर्फ लागियोे तर विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न किसिमका समस्या र अवरोध आउँदा जुन उद्देश्यका साथ काम थालिएको थियो त्यो कम उपलब्धि भयो की भन्ने ठानेको छु । हामीले थालेका विभिन्न कुराहरुको महत्व र यसको उपलब्धिको महत्व नबुझ्दा केही समस्या भयो कि भन्ने ठानेको छु । तर पनि केही गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ यहाँ आएका थियौँ । त्यो हाम्रो सोचाईमा कत्ति पनि तलमाथि भएको छैन । अझ यो पहिलो बर्षमा आत्मविश्वास बढेर गएको छ ।
चुनावको बेला ठूला–ठूला कुरा गर्ने अहिले आएर केही गर्न नसक्ने हो भने कामै छैन । त्यसकारण यो विषयमा उपमहानगरपालिका खासगरी मेयर साप लाग्न आवश्यक भएको मैले देखेको छु ।
गर्नसक्ने कुरा मात्र बोल्नुपर्छ । जनतालाई ढाट्ने काम गर्नुहुँदैन । त्यसैले अबको योजना यो–यो भनेर भन्ने पक्षमा म छैन । जनतासँग सधै छु, सधै नजिक रहनेछु मेरो सबै समय वडाका जनताको लागि लगाएको छु ।
अबको हाम्रो मुख्य योजना भनैकै बजार कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा नै हो ? अर्कोकुरा यो वडामा रहेको बसपार्क क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि हाम्रो मुख्य योजना हो । खासगरी बसपार्क क्षेत्रमा स्वच्छ सफा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो अबको योजनासमेत हो । जहाँका नागरिकले अहिले पनि स्वच्छ सफा खानेपानी खानबाट बञ्चित भैरहेको अवस्था छ । यो वडामा बस्ती व्यवस्थापनको कुरा पनि हाम्रो अबको योजना हो । बसपार्क क्षेत्रमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउनतर्फ लाग्नेसमेत हाम्रो अबको योजना रहेको छ । ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्ने घरपरिवारलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिदैन स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । चुनावको बेला ठूला–ठूला कुरा गर्ने अहिले आएर केही गर्न नसक्ने हो भने कामै छैन । त्यसकारण यो विषयमा उपमहानगरपालिका खासगरी मेयर साप लाग्न आवश्यक भएको मैले देखेको छु । यो कुरामा म अब थप योजनाका साथ अघि बढ्ने सोचमा समेत रहेको छु । अर्को कुरा बजार क्षेत्रमा रहेका भित्री गल्लीहरुको व्यवस्थापन गर्न जरुरी भैसकेको छ । वडा मात्र होइन उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन आवश्यक भएको म आफूले देखेको छु । धेरै योजना छन् भनेर मात्र हुँदैन गरेर पनि देखाउनुपर्छ । त्यसकारण यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर मात्र हुन्छ भन्ने म ठान्दैन र मेरो स्वभाव त्यस्तो पनि छैन । त्यसैले गर्नसक्ने कुरा मात्र बोल्नुपर्छ । जनतालाई ढाट्ने काम गर्नुहुँदैन । त्यसैले अबको योजना यो–यो भनेर भन्ने पक्षमा म छैन । जनतासँग सधै छु, सधै नजिक रहनेछु मेरो सबै समय वडाका जनताको लागि लगाएको छु । मेरो कार्यकालभित्र सकेजति म आफूले अवश्य गर्ने प्रयास गर्ने छु । र अर्को कुरा बजारमा झुण्डिएका तारहरुको सही व्यवस्थापन, बत्ती व्यवस्थापन, बिग्रेका सिसि क्यामरासमेत सुचारु गर्नुछ । सँगै सुन्दर र व्यवस्थित सहर गराउने कुरामा ध्यान दिनुछ । त्यही नै हाम्रा लागि अबको मुख्य कुराहरु हुनसक्छनर । त्यसको लागि नगर प्रमुखको समेत दायित्व रहन्छ । म स्वयम् लाग्छु नै यो विषयमा उपमहानगरपालिकालाई र प्रमुखलाई सधै घचघचाउने मेरो काम रहने पक्का हुन्छ ।
पहिला नै थाहा थियो केही जिम्मेवारी बहन गर्दा विभिन्न चुनौतिको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा । चुनौतिको बीचमा काममा सफलता हासिल गर्नसक्नु उपलब्धि हो । खासगरी यो पहिलो बर्षमा हामीलाई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न कुराहरुको सुरुवात ग¥यौ, तर त्यो कार्यान्वयनमा केही न केही समस्या देखिए जुनकुरा हाम्रा लागि यो पहिलो बर्षमा मुख्य चुनौतिको रुपमा रहे । आउँदा दिनमा यस्ता कुरालाई कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अझ सशक्त रुपमा लाग्नुपर्ने समेत मैले देखेको छु । बजारमा यातायात व्यवस्थापन, पार्किङ, सडक व्यवस्थापन, हामीले थालेको हर्न निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयन, नाला तथा ढल व्यवस्थापनजस्ता कुराहरु हिजो पनि चुनौतिको रुपमा रहेका थिए । अहिले आफूहरु जनप्रतिनिधिको रुपमा आएपनि केही काम सुरुवात गर्दासमेत त्यसलाई कार्यान्वयनको कुरा कहि न कतै केही चुनौतिको रुपमा रहि रहेसँगै यो हाम्रो वडा र हाम्रा लागि मात्र नभएर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लागि समेत चुनौति हो । यो समाधानका लागि उपमहानगरपालिकाले समेत ठोस कार्यक्रम र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
सडक सुधार र सडकको काम गर्ने सडक विभागले न केही काम गर्न दिन्छ, न त आफूले नै गर्छ, यो कस्तो तरिका हो बुझि नसक्नु छ ? सडकमा केही सुधारको काम गर्न थाल्यो गर्न दिदैन ? बरु आफ्नो जिम्मेवारी हो भनेर रोक्ने काम गर्छ ।
अर्को कुरा भनेको पहिलो बर्ष बजार व्यवस्थापनको कुरासँगै कार्यालयका कामकाज अझ व्यवस्थित गर्न आवश्यक जनशक्ति नहुँदा ठूलो चुनौतिको सामना भइरहेको छ । जुनकुरा अहिले पनि कायम भएको मैले देखेको छु । नेपालका विभिन्न सहरमा नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिएको छ, तर तुलसीपुरमा यो कुरा नहुँदा बजारलाई व्यवस्थित गर्न केही समस्या देखिएको छ । बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । बजारमा हुने सडक व्यवसाय व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । बजारभित्र सडक खाल्डाखुल्डीसमेत पुर्न नसकेको अवस्था छ । वडाले मात्र गरेर केही हुँदैन । न त यसमा उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिएको छ, न त यो सम्बन्धीको सरोकार राख्ने सडक विभाग उसले ध्यान दिन सकेको छ । जुनकुरा ठूलो समस्या र चुनौतिको रुपमा यो पहिलो बर्ष रहेको छ । सडक सुधार र सडकको काम गर्ने सडक विभागले न केही काम गर्न दिन्छ, न त आफूले नै गर्छ, यो कस्तो तरिका हो बुझि नसक्नु छ ? सडकमा केही सुधारको काम गर्न थाल्यो गर्न दिदैन ? बरु आफ्नो जिम्मेवारी हो भनेर रोक्ने काम गर्छ । कसरी बजारका सडक व्यवस्थापन हुने हुन यस्ता केही कुरा जो हाम्रा लागि ठूलो समस्या र चुनौतिको रुपमा देखापरेका छन । सँगै अर्को कुरा उपमहानगरपालिकाले निश्चित बजेटको सिलिङ वडालाई पठाउने गर्छ त्यो बजेटभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा उपमहागरपालिकाले ध्यान दिन सक्दैन कसरी मुख्य सहर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? उपमहानगरको पनि राम्रो सहयोग वडा नम्बर ५ को काममा भएको छैन ।
मैलै अघि नै भनिसके केही गर्न र बजारमा सुधार ल्याउन भनेर नै आफूहरु जनप्रतिनिधिको रुपमा आएको हो, जनप्रतिनिधिको रुपमा आइरहदा थुप्रै अवसरसमेत छन् । हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको यो पाँच वर्षको कार्यकालमा सबैले देख्ने गरी बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु नै हो । त्यसको लागि हामीले विभिन्न काम र योजनाको सुरुवातसमेत गरिसकेका छौ । बजार क्षेत्रभित्र रहेका सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सबैका अघि प्रस्ट छ ।
त्यसैले यो आफ्नो कार्यकालमा कम्तिमा बजार क्षेत्र र वडाका प्रत्येक टोलका सडकहरुमा पिच गर्ने कुरा मेरो लागि अवसरको रुपमा रहेको मैले देखेको छु । त्यही कारण यो विषयमा उपमहानगपालिका र अन्य सरोकार निकायसँग समन्वय गर्दै बजारमा रहेका प्रत्येक सडकहरुलाई कालोपत्रे गर्नु मेरो लागि आफ्नो कार्यकालको एउटा ठूलो अवसरको रुपमा रहेको छ । तुलसीपुरको दाङको एउटा मुख्य सहरसमेत हो । यो सहरको विशेषता झल्काउने गरी काम गर्न आफ्नो लागि ठूलो अवसरको रुपमा रहेको मैले पाएको छु ।
उपमहानगरले समेत तुलसीपुरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि ल्याएको छ । एक्लै वडाले गरेर मात्र हुने कुरा होइन । यही कुरालाई ध्यान दिएर आफुले वडा नम्बर ५ को मुख्य सहरको विकासमा परिर्वतन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा अवसरसमेत हुनसक्छ ।
उपमहानगरपालिकाले समेत तुलसीपुरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि ल्याएको छ । एक्लै वडाले गरेर मात्र हुने कुरा होइन । यही कुरालाई ध्यान दिएर आफुले वडा नम्बर ५ को मुख्य सहरको विकासमा परिर्वतन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा अवसरसमेत हुनसक्छ । बाँकी कुरा उपमहानगरपालिकाको समेत भूमिका यसमा हुन जरुरी छ । मैले जति कुरा भनेको छु, यसमा उपमहानगरपालिकाको समेत भूमिका आवश्यक रहन्छ भन्ने कुरा मैले ठानेको छु । र यो सबै पहिलो बर्षमै तयार हुने कुरा भने होइन केही त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो भन्ने मैले ठानेको छु ।
तुलसीपुर उपमहानगरको केन्द्र मात्र नभएर जिल्लाका साथसाथै छिमेकी जिल्लाको एउटा प्रमुख बजार हो । त्यसैले यहाँ विकास गर्न र बजारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा ठूलो सम्भावना हो । तुलसीपुरको मुख्य सहरको विकासमा ध्यान नदिएर उपमहानगरपालिकाले भन्ने गरेको स्मार्ट सिटीको कल्पनै गर्न सकिदैन । त्यसकारण पनि यहाँ विकास हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । अन्य वडाहरु भन्दा सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने यो वडामा थुप्रै सम्भावना रहेका छन् । त्यो अवसरको कुरा होस् वा सम्भावनाको कुरा अन्य क्षेत्रभन्दा निकै सहज रहेको मैले देखेको छु । सँगै चुनौतिसमेत त्यत्तिकै रहेको मैले पाएको छु । यो वडाको कुरा मात्र छैन पुरै तुलसीपुर उपमहानगर कस्तो बन्ने र उपमहानगरपालिका प्रमुख सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरामा समेत निर्भर गर्दछ । त्यसैले चाहे र गरेमा विकासमा फड्को मार्न ठूलो सम्भावना रहेको छ । उपमहानगरपालिका स्वयम्ले हरियाली सहर, सबैले घुम्न लायकको सहर व्यवस्थित सहर बनाउने कुरा अघि सारेको छ । त्यसकारण पनि यो वडामा विकासका थुप्रै सम्भावना भएको मैले देखेको छु । निश्चय पनि यो वडा बजारको प्रमुख ठाउँमा रहेको छ यहाँ थुप्रै कुराको आधारसमेत रहेको छ त्यसैलै सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेका छन् ।
उपलब्धिको हिसाबले हामी बजार व्यवस्थापनको लागि केही नयाँ कामहरुको सुरुवात गर्न सकेका छौँ । केही न केही भएपनि सुधार पक्कै आएको छ । त्यो एउटा उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेको छु । बजारका भित्री सडकहरु व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी अघि बढेका छौँ । केही भएपनि काम गरेर सुधार ल्याउन सकेका छौँ । त्यो हाम्रो अर्को उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेको छु । हामीले यो पहिलो बर्षमा जनताले महसुस गर्ने गरी काम गरेका छौँ । जुन जनताले पनि महसुस गरेका छनर । जनतालाई खुशी पार्न सक्नु पनि उपलब्धि हो । अञ्चल अस्पताल जाने सडकको अवस्था नाजुक थियो, अहिले पिच गर्दैछौँ र काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ त्यो पनि उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेको छु । हामीले पहिलो बर्ष बजार व्यवस्थापनको लागि पार्किङ, हर्न निषेधित क्षेत्रको सुरुवात, वीरेन्द्र चोकलगायत बजारको मुख्य चोकहरुको केही भएपनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ, त्यो पनि उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेको छु । र सबैभन्दा यो एक वर्षको मुख्य उपलब्धि भनेको जनतालाई दुःख दिएका छैनौ । जनता वडाको काम र जनप्रतिनिधिको कामदेखि खुशी छन् । हामी सधै जनताको साथमा छौँ र जनताले पनि हामीलाई साथ दिएका छन्, त्यो ठूलो उपलब्धि हो ।